Nlereanya Mbupu Nhọrọ - N'ogbe diffusers maka mkpa mmanụ | Aroma dị mfe
Anyị ghọtara na enweghị mmesi obi ike ka mma, banyere ogo ngwaahịa anyị, karịa ịnwe anụ ahụ iji nyere gị aka ịme mkpebi.
Ọrụ Sample anyị zuru ụwa ọnụ na-emetụta ndị ahịa anyị B2B yana ụlọ ọrụ ndị debanyere aha na AromaEasy. Ọrụ ahụ bụ naanị mmanụ dị mkpa, dị ka egosiri na katalọgụ anyị. Ụlọ ọrụ ndị edebanyere aha ga-enwerịrị ọrụ ma ọ bụ ọrụ metụtara katalọgụ ngwaahịa anyị. Ọrụ Sample anyị emetụtaghị ụlọ ọrụ edebanyeghị aha, ma ọ bụ ndị onwe.
Samples enweghị uru azụmahịa ma ewepụtara ha naanị iji nyochaa njirimara anụ ahụ na nka na/ma ọ bụ mee ule teknụzụ na ndakọrịta.
AromaEasy nwere ikike ịjụ ụlọ ọrụ ọ bụla na-anaghị emeju iwu edepụtara.
Kedu ihe ọrụ Sample gụnyere?
Nhọrọ dị ukwuu nke mmanụ dị mkpa na mbupu mba ụwa. anyị ga-ana obere ego njikwa ihe nlele na ụgwọ mbupu (25 USD).
Ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ihe ntanetị nwere naanị mmanụ 6 dị mkpa. Mbupu kacha nke 2 maka ụlọ ọrụ edebanyere aha ọhụrụ.
Agbanyeghị na Sample enweghị uru azụmaahịa, ndị ahịa na ụlọ ọrụ edebanyere aha na-ahụ maka ịkwụ ụgwọ kọstọm ọ bụla ma ọ bụ ụgwọ mbubata na ụgwọ, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
AromaEasy nwere ikike imezi ọnọdụ ọ bụla yana / ma ọ bụ kwụsị ọrụ Sample na-enweghị ọkwa mbụ.
Ụgwọ njikwa ihe nlele na ụgwọ mbupu
Ị nwere ike weghachi ihe nlele ahụ n'ime ụbọchị 30 wee nweta nkwụghachi zuru ezu.
ego njikwa na ego mbupu $25